Appilikeeshiiniin Telegram biyyoota addunyaa heddu keessatti dhaabbatee akka ture beekame - NuuralHudaa
Last updated May 3, 2018 199
Appilikeeshiiniin Telegram ganama har’aa irraa jalqabee biyyoota addunyaa heddu keessatti dhaabbatee akka ture dhaabbatichi beeksise. Dhaabbatichi gama Twitteriitiin akka ibsetti, humni elektrikii naannawa Amasterdaamitti addaan cituu isaatiin walqabatee, Applikashiinii Telegram irrattis rakkoon teknikaa kan uumame tahuu beeksise. Kanuma hordofuun biyyootaAwurooppaa, Ruusiyaa, Afrikaa fi Baha jiddu galeessaa keessatti hojjataa kan hin jirree tahuu dhaabbatichi hime.
Dhaabbatichi ibsa isaa kanaan, rakkoo uumame furaadhaaf kan hojjataa jiru tahuu ibsuun, fayyadamtoonni Appilikeeshiinii Telegram obsaan akka eegan gaafate. Hanga yeroo gabaasa kana itti qindeessineetti Appilikeeshinichi naannawa addaan citee ture tokko tokkotti kan deebi’e tahuun beekameera.
July 7, 2022 sa;aa 7:46 am Update tahe